Weeraro Saf Ah Oo Lagu Qaaday Saldhigyo Ciidan Oo Kuyaal Sh/hoose. – Bogga Calamada.com
Weeraro Saf Ah Oo Lagu Qaaday Saldhigyo Ciidan Oo Kuyaal Sh/hoose.
Weeraro saf ah oo isugu jiro dagaallo toos ah iyo kuwa dhabbo-gal ah waxay ciidamo ka tirsan xarakada shabaabul Mujaahidiin saacadihii lasoo dhaafay siyaabo kala duwan uga fuliyeen deegaanno ka tirsan Sh/hoose kuwaas oo lagu beegsaday maleeshiyaadka kooxda Farmaajo.
Howlgalka koowaad oo ahaa mid safmareen ah waxay ciidamada xarakada Mujaahidiinta Al-shabaab ku qaadeen saldhigyada ciidamada dowladda federaalka ay ka samaysteen degmooyinka Jannaale iyo Owdheegle oo ka wada tirsan Sh/hoose. waxaana saldhigyadaas ka dhacay dagaallo culus oo u dhaxeeyay ciidamada Mujaahidiinta iyo kuwa dowladda federaalka.
Sidoo kale ciidamada jamhadda Mujaahidiintu waxay weerar jidgal ah oo si wanaagsan loo qorsheeyay u dhigeen maleeshiyaad ka tirsan murtadiinta oo ku socdaalayay inta u dhaxaysa deegaanka Sabiid iyo degmada Afgooye.
Ilo xog-ogaal ah waxay xaqiijiyeen in weerarkaas dhabbo-galka ah lagu dilay labo askari oo ka tirsanaa kuwa federaalka halka sidoo kalena ciidamada shabaabul Mujaahidiin ay weerarkaas kusoo ghaniimeysteen qori iyo boosh ay maleeshiyaadka fagaaraha kaga carareen.
Dhanka kale meel aan iyana sidaas uga fogayn deegaanka Sabiid waxaa ka dhacay weerar jidgal ah oo loo maleegay ciidamo ka tirsan kooxda uu madaxa u yahay Farmaajo waxaana maleeshiyaadkan weerarka lagu beegsaday xilli ay wadeen dhaqdhaqaaqyo ciidan.
Weerarja kammiinka ah waxa uu si gaara kaga dhacay duleedka degmada Owdheegle waxaana goobta ka dhacay dagaal qaraar oo in muddo ah qaatay. ilo wareedyo laga soo xigtay saraakiisha dagaalka ciidanka shabaabul Mujaahidiin waxay xaqiijiyeen in weerarkaas lagu dilay 2 askari oo uu ku jiray taliye Horin lagu magacaabi jiray Cabdullaahi Yuusuf.
Wilaayada Sh/hoose waxay labadii maalin ee ina dhaafray noqotay kawaanka ciidamada dowladda iyo kuwa shisheeyaha qaraxyo iyo weeraro kala duwan oo ka dhacay deegaanno ka tirsan wilaayadaas waxaa labadii maalin ee lasoo dhaafay lagu dilay saraakiil ciidan iyo maleeshiyaad ka tirsanaa ciidanka waxa loogu yeero xoogga iyo kuwa ay soo carbisay dowladda Turkiga iyo askar ka tirsanaa ciidamada shisheeye gaar ahaan kuwa ka socda dowladda Yugaandha.